Xafiiska Adeega Dadwaynaha: Qaabilaaddii Farxaan Hadafoow – Sen. Abshir Axmad
Runtii maanta farxad weyn ayey ii ahayd in aan kula kulmo xafiiskeyga adeega dadweynaha ee Muqdisho Farxaan Hadaafoow oo ah wiil 19 jir ah kuna dhashay naafonimo qaarka dambe ah. Farxaan waxa uu nagu matelay fagaaraha caalamka tartankii naafada ee loo yaqaano “The Paralympic Games” gaar ahaan qaybtiisa “Wheelchair racing” ee 2016 -kii lagu qabtay magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil.
Tartankii ka dhacay Rio de Janeiro ee ahaa 100 mitir ee uu ka qaybgalay, Farxaan waxa uu ka galay kaalinta 5aad isaga oo tartankaas hogaaminayey ilaa 60kii mitir ee ugu horeysay, laakiin nasiibdaro waxaa laga hormaray Farxaan 40kii mitir ee ugu dambeeyey isaga oo weli ka guuleystay tartamayaal badan oo ka kala socday dunida koowaad.
Runtii taasi waxa ay ahayd guul aad u weyn oo uu Farxaan Hadaafow u soo hooyey Soomaaliya. Hadaba, guusha Farxaan waxa ay ku tusineysaa in ay naafadu tahay oo keliya mida qalbiga ee aysan ahayn mida xubnaha muuqda. Hadana Farxaan waxa uu mar kale nagu metalayaa tartanka World Championship oo bisha July ee sannadkan ka dhici doona magaalada London. Farxaan waxa uu markaan ii sheegay in uu hankiisu yahay guusha koowaad. Eebow ku soo guulee! Aamiin.
Waxaan rabaa inaan halkan mahadcelin ballaaran ugu soo gudbiyo Farxaan Hadaafow oo magaceena kor u qaaday suurtagalna ka dhigay in uu dadka Soomaaliyeed ee aan naafada ahayn uu tusiyo in uu kaalintiisii ka soo dhalaalay.
Guuleyso Farxaan magaceena ayaad sare u qaaday!